အကြင်နာနန်းတော်: ရန်ကုန်မြို့၏ အရှေ့မြောက်ဘက် ၃၆၅မိုင်ခန့် အကွာကို ဗဟိုပြု၍ လှုပ်ခတ်သွားသော ငလျင်သတင်းများ.
ရန်ကုန်မြို့၏ အရှေ့မြောက်ဘက် ၃၆၅မိုင်ခန့် အကွာကို ဗဟိုပြု၍ လှုပ်ခတ်သွားသော ငလျင်သတင်းများ.
မတ်လ ၂၄ ရက် ကြာသပတေးနေ့ ညပိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံ နယ်စပ်တွင် လှူပ်ခတ်ခဲ့သော ပြင်းအား ၇.၀ ရှိ အင်းအားပြင်း မြန်မာ ငလျင်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း တာချီလိတ် တာပင် ဒေသတွင် တောင်ပြိုခြင်း နှင့် အဆောက်အအုံများ ပြိုကျခြင်းများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လူ ၁၀ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ့ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက် အရ အဆိုပါ ငလျင်သည် ဒေသစံတော်ချိန် ည ၈ နာရီ ၂၉ မိနစ် (ကမ္ဘာစံတော်ချိန် ၁၃ နာရီ ၆၉ မိနစ်) တွင် ရှမ်းပြည်နယ် လွယ်မွေရွာ အနီးကို ဗဟိုပြု လှုပ်ခတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ငလျင်၏ ဗဟိုချက်မှာ မြေအောက် ၁၀ ကီလိုမီတာ အကွာတွင် ဖြစ်ပြီး မြန်မာ၊ ထိုင်း နှင့် လာအို နယ်စပ်တစ်လျောက် ပြင်းထန်စွာ လှုပ်ခတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ငလျင်ဖြစ်ပွားပြီး နောက်ထပ် ၂ နာရီခန့်အကြာတွင် ပြင်းအား ၅.၄ အဆင့်ရှိ အင်အားပြင်း ငလျင်တစ်ခု အဆိုပါ ဒေသတွင်ပင် ထပ်မံ လှုပ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ငလျင်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေရာတော်တော်များများကို ထိခိုက်ခဲ့ပြီး နယ်စပ်မြို့ တာချီလိတ် တွင် အပြင်းထန်ဆုံး ဖြစ်ကာ တောင်ကြီး၊ ပဲခူး ၊ ရွှေကျင် ၊ နေပြည်တော် ၊ မန္တလေး နှင့် တောင်ငူမြို့များတွင်လည်း ငလျင်လှုက်ခတ်မှုကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ တာချီလိတ်ရှိ တာဝန်ရှိသူများက အများပြည်သူများအား မိမိတို့ အဆောက်အအုံ အပြင်ဘက်တွင် ထွက်နေကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးမြို့တော် ရန်ကုန်တွင်မှု ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကို ဖြည်းညှင်းစွာ တွေ့ကြုံခဲ့ကြောင်း လူအများစုသည် ၎င်းတို့ အိမ်ယာများ အပြင်ဘက်တွင် ထွက်နေကြကြောင်း မြို့နေပြည်သူတစ်ဦးက ဆိုပါသည်။
အဆိုပါ အင်အားပြင်း ငလျင်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ တရုတ်နှင့် ဗီယမ်နမ် နိုင်ငံများကိုလည်း ထိခိုက်ခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ချင်းရိုင်မြို့တော်တွင် အဆောက်အအုံ ပြိုကျပြီး လူတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့သည်။
ငလျင်သည် ၇၇၂ ကီလိုမီတာ အဝေးတွင်ရှိသော ဘန်ကောက်မြို့တော်ကိုလည်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီး အဆောက်အအုံများ လှုပ်ရမ်းနေသည်ကို မြင်တွေ့ရကြောင်း ထိုင်းမီဒီယာများက ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ အမေရိကန် ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ တိုင်းတာရေးဌာနက ငလျင်ပြင်းအားကို မူလက ၇.၀ ဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ၆.၈ ဟု ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့၏ အရှေ့မြောက်ဘက် ၃၆၅မိုင်ခန့် အကွာကို ဗဟိုပြု၍ ရစ်ချတ်တာစကေး ၇.၀ ( ၆.၈ ဟု ပြင်ဆင်ခဲ့) ရှိ အင်အားပြင်း ငလျင်တစ်ခု ယနေ့ ကြာသပတေးနေ့ ညပိုင်း တွင် မြန်မာ ထိုင်း လာအို နိုင်ငံ နယ်စပ်အနီး မြန်မာနိုင်ငံ နယ်နိမိတ်အတွင်း လှုပ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း နယူးယောက်တိုင်းမ်၏ ဖော်ပြချက်အရ သိရှိရပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ် ချင်းရိုင် မြို့ ၏ မြောက်ဘက် မိုင်၇၀ အကွာခန့်တွင် ဗဟိုပြု လှုပ်ခတ်ခဲ့သည်ဟု ထိုင်း ရုပ်မြင်သံကြားမှ အပျက်အစီးသတင်းနှင့်အတူ ဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါ ငလျင်ကြောင့် အသက် ၅၅နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး တစ်ဦး အိပ်ပျော်နေစဉ် မျက်နှာကြက်နံရံပြိုကျ ခဲ့ရာမှ သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည် ဟု ဖော်ပြထားပြီး
အခြား အပျက်အစီးအဆုံးအရှုံး သတင်း ကိုမူ အတိအကျ မသိရှိရသေးကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါငလျင်နှင့်ပါတ်သက်ပြီး ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှု ပမာဏကို ၎င်းဧရိယာအတွင်း ပါဝင်သော မြန်မာနိုင်ငံ ဘက်မှသော်လည်ကောင်း လာအိုနိုင်ငံ ခရီးသွားမြို့ တစ်မြို့ ဖြစ်သော လွမ်ပရာဘွမ် မှသော်လည်းကောင်း တိအကျမသိရသေးဟု ဖော်ပြထားပါသည်။
အဆိုပါ ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့် ဒေသတွင်း ဆူနာမီ ကဲ့သို့ နောက်ဆက်တွဲ အန္တရာယ် အကြီးအကျယ် ကျရောက်နိုင်ခြေ မရှိကြောင်း ပစိဖိတ်ဒေသ ဆူနာမီ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးဌာနမှ ပြောကြားပါသည်။
မြေမျက်နှာပြင်မှ အောက်ဘက် ၆မိုင်ခန့် အနက်တွင် ဗဟိုပြုခဲ့သော အဆိုပါငလျင်ကြောင့် ဖြစ်ပွားရာဒေသတွင် ပျက်စီးမှု အကြီးအကျယ်ရှိနိုင်ကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံ ဘူမိဗေဒ လေ့လာ တိုင်းတာရေးဌာနမှ ပြောကြားပာသည်။ အဆိုပါ ငလျင်ဖြစ်ပွားပြီး နာရီဝက်ခန့်အကြာတွင် ပြင်းအား ရစ်ချတ်တာစကေး ၄.၈ ရှိ ငလျင်တစ်ခု ထပ်မံလှုပ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
"ကျွန်တော်ဟာ ပုခက်ထဲ က ခလေးတစ်ယောက်လို့ ဖြစ်နေခဲ့တာ" ဟု ထိုင်းနိုင်ငံမှ ကျောင်းဆရာတစ်ဦး က တယ်လီဖုန်း ဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်း မှုတွင် ဖြေကြားခဲ့ပြီး ၄င်း ကပင် "ဒီမှာ ငလျင်လှုပ်ပြီးတော့ အခြေအနေ တွေအားလုံး က အထိန်းအချုပ်မဲ့ပြီး ရှုပ်ထွေးနေတယ်" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ပို့စ်ရေးသားသူ ဧကရီ ရက်စွဲ Saturday, March 26, 2011
ရန်ကုန်မြို့၏ အရှေ့မြောက်ဘက် ၃၆၅မိုင်ခန့် အကွာကို ...